Silk Pillowcase | Anoshamisa Kugadzira Uye Yekutengesa Kambani Limited
Musiyano uripo pakati pe19 mm, 22 mm, 25 mm yeiyo silika pillowcase
Iyo muzana yesiriki pasikweya padiki yeiyo 22 mm silika ingangoita 20% kukwira kupfuura iyo ye19 mm silika. Iyo yepamusoro mamai uremu zvakare zvinoreva kuti kuruka kwakanyanya, uye iyi denser weave inobatsira kuchengetedza sheen uye kubwinya kwesirika. Izvi zvinopa nzvimbo yekusimba kwakasimba.
Hupenyu hwesheketi yakachena ine 22 mm uremu inofungidzirwa kuve yakapetwa kaviri iya yemasheki machira ane akadzika mamai masimbi. Kunyangwe iri mukobvu kupfuura iyo 19 mm silika, iyo 22mm silika rakapfava seye 19 mm, uye ine kupenya kupenya.
Yakachena sirika machira ane momme huremu hwe19 mm ari akakura musanganiswa wekusimba, kusimbisa, uyeumbozha. Dzinodhura, uye dzinoitirwa kushandiswa zuva rega rega, uye dzinogona kumira mukuwachwa kwakajairika. Kana ikatarisirwa zvakanaka, iyo sheen, usability, uye kubwinya kweiyo 19 mm silika ichagara kwenguva yakanaka. Kungofanana nesiriki mamirimita makumi maviri nemasere, iyo 19mm silika haina musono uye inotsvedzerera.
Iyo huwandu hwesilika pasikweya inch ye25 mm silika iri 30% kupfuura iyo ye19 mm silika. Nekutarisirwa kwakakodzera uye kuwachirwa kwakakodzera, iwo 25 mm silk sheet inogona kugara kweanenge makore gumi. Iyo 25 mm silika inozivikanwa nehunyanzvi hwayo uye runako. Iyo 25 mm silika jira inogona kushandiswa kune zvinhu zvakaita semubhedha wemuchato, kupemberera kubatanidzwa, uye zvipo zveyeuchidzo.
Kukura Kwesiriki Pillowcase
Mamwe mavara esarudzo
Maitiro ekugadzirisa iyo yakasviba nhema nhema sirika pillowcase
Aya matanho akareruka ekugadzirisa aunotora kudzoreredza kupenya kweako kwakasakara sirika pillowcase. ●
● Nhanho yekutanga
Dururira ¼ mukombe wevhiniga chena mukati mekapu ine mvura inodziya.
● Nhanho mbiri
Simbisa musanganiswa zvakanaka uye nyudza pillowcase mukati memhinduro.
● Nhanho nhatu
Siya pillowcase mumvura kusvika yanyorova kwazvo.
● Nhanho ina
Bvisa pillowcase uye sukurudza zvakanaka. Iwe unofanirwa kuona kuti unosuka mushe kusvikira vhiniga yese uye hwema hwayo hwaenda.
● Nhanho shanu
Svina zvinyoro nyoro ndokuwaridza pachirauro kana tambo isinga zarwe nechiedza chezuva. Sezvandakambotaura, chiedza chezuva chinokurumidzira ruvara kupera mumachira.
Chii chaunofanirwa kuita usati watenga sirika pillowcase?
Usati watora machira esiriki pillowcase, bvunza mugadziri wako kuti akupe iyo bvunzo yekuyedza kune kusimba kwemucheka wesilika. Ndine chokwadi chekuti hauzodi jira resilika rinoshandura ruvara mushure mekuwacha kaviri kana katatu.
Semutengi, kunyangwe mutengi akananga kana mutengesi / wekutengesa, zvakakosha kuti iwe uzive kuti jira resilika rauri kutenga rinoita sei nekuwacha, ironing, uye zuva. Uyezve, colorfastness inoratidzira machira 'mwero wekurwisa ziya.
Asi kana iyo bvunzo mushumo isipo, unogona kumhanya nekuzviongorora pachako. Kumbira chikamu chemucheka wauri kutenga kubva kumugadziri uye geza nemvura yakasangana nemvura yegungwa. Mushure meizvozvo, chengetedza nesimbi inopisa yekuwachira. Zvese izvi zvaizokupa iwe pfungwa yekuti yakasimba sei iyo sirika zvinhu pillowcase iri.